Danjire Mahiga oo booqanaya Garoowe xilli aan wali la shaacin madasha lagu marti-galin doono shirka Soomaaliya. – Radio Daljir
Danjire Mahiga oo booqanaya Garoowe xilli aan wali la shaacin madasha lagu marti-galin doono shirka Soomaaliya.
Agoosto 6, 2011 12:00 b 0
Garoowe, August 06- Waxaa goor dhawayd soo gaaray magaalada Garoowe ee xarunta Puntland wafdi uu hogaaminayo danjire Augustine Mahiga, wakiilka xog-hayaga guud ee qaramada midoobay (QM) u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.
Danjire Mahiga ayaa lagu wadaa in uu kulan la qaato madaxwaynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, waxana la filayaa in wadahadlkooda ay xoogga ku saari doonaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Arrimaha ay ka hadli doonana labada mas’uul ayaa la filayaa in ay ugu waynaan doonto madasha lagu marti-galin doono shirka qorshaysan ee looga arrinsanayo xaaladda kala-guurka ah ee Soomaaliya iyo arrimaha federaalka. Sidoo kale waxa la filayaa in ay isla soo qaadaan macaluusha ba’an ee baryahan soo food-saartay koonfurta Soomaaliya.
Puntland ayaa si wayn u hollinaysa in ay Garoowe ku marti-galiso shirkaas, madaxwayne Faroole oo dhawaan ka hadlay munaasabad lagu maamusayay sannad-guuradii 13aad ee asaaskii Puntland-na waxa uu ku celiyay in Puntland ay sideedii wali u sugayso in shirka lagu qabto Garowe oo uu ku tilmaamay in ay xal u tahay dhibaatada ka jirta Soomaaliya.
Booqasho uu todobaadkii hore Muqdisho ku tagay ku xigeenka danjire Mahiga Christiano Manhal ayuu kadib shirar uu la galay madaxda federaalka waxa uu sheegay in la isla gartay xilliga la qabanayo shirka inkastoo uunan ka hadlin madasha.
Imaanshaha Mahiga ayaa ku soo beegmaya xilli ay maanta kooxda Alshabab guud ahaaba isaga baxday magaalada Muqdisho, mana cadda in labadan mas’uul ay isla soo qaadi doonaan marxalladdan cusub.
Daljir kala soco wixii wacaal ah ee ka soo kordha booqashada danjire Mahiga.
Daljir, Garoowe http://daljir.com/
Maraykanka oo qaaday tallaabooyin lagu fududeeynayo howalaha samafalka iyo gaaritaanka dadka macaluulay.
R/wasaare Gaas oo booqday xerada Badbaado, cambaareeyeyna falkii weerar ee maanta; tirada dhimasha oo sii korortay.